Tonizia: Sivana ankolaky ny gazety iray! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2018 13:34 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Marsa taona 2009 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tamin'ny herinandron'ny 10 marsa 2009, nosivanin'ny governemanta Toniziana ny gazety, El Mawkef. Bilaogy voasivana Tunisia Watch manoratra hoe:
Tamin'ny zoma [13 Marsa], niampanga ny manampahefana Toniziana ho “mandraoka mangingina” ireo gazetiny nivoaka farany ny tonian-dahatsoratry ny gazety mpivoaka isan-kerinandro, Al Mawkef, mpitondra tenin'ny Antoko Liampandrosoana Demaokratika (ADM), anisan'ny mpanohitra ara-dalàna. Nolavin'ny manampahefana avy hatrany ny fiampangana, nolazain'izy ireo fa “fiampangana diso”.
Araka ny filazan'Atoa Khechena, nisy ny fanerena natao tamin'ity orinasa tsy miankina momba ny fitsinjarana gazety ity, amin'izay dika roa tsirairay avy ihany no zaraina isaky ny toeram-pivarotana. Tamin'ny fanambarana nalefa tany amin'ny Associated Press, mandray ity “fepetra manasazy” ity ho toy ny “fanafihana ny fahalalaham-pitenenana sy sazy atao amin'ny gazety mamoaka lahatsoratra mahaleotena izy.”
Nilaza ny manampahefana, na dia izany aza, fa “mipoitra ara-potoana ity gazety ity ary zaraina manerana ny firenena tsy misy famerana, tahaka ny fampitam-baovao hafa rehetra. “Manao ny asany ara-politika sy fampitam-baovao an-kalalahana ireo antoko mpanohitra rehetra,” hoy ny loharanom-baovaon'ny fanjakana. (AP -03.14.2009)